भोलेबाबाको ताकमा युवतीहरू « प्रशासन
प्रकाशित मिति : 13 March, 2018 7:48 am
कैलाली । ‘एक जना महिला बिरामी भएर भोलेबाबा भनिने रामबहादुर चौधरीको घरमा आइन्। राधाजस्तै खचाखच मान्छे भरिएको आँगनमा उनलाई राखेर भोलेबाबा उर्फ रामबहादुरले। त्यसपछि झारफुक सुरु भयो, उनकी ‘पार्वती’ अथवा सुखड गाउँकी स्मारिका चौधरीबाट। तिम्रो बिहेमा मैले पेन्टी उपहार दिएकी थिएँ, तिमीलाई थाहा छ कि छैन ? हेर त तिम्रो पेन्टी फोहोर भएको छ–स्मारिकाले झारफुक गरेझैं गरेर भनिन्। ती महिलाले लजाउँदै खचाखच मान्छेबीच सलवार खोलिन् र पेन्टी देखाइन्। त्यहाँ भएका सबैले ताली पिटे’, राधामाथि कुटपिट हुनुभन्दा केही दिन अघिको एउटा घटना सुनाउँदै स्थानीय युवती रेनुका बोहराले भनिन्।
पार्वती बुढा घोडाघोडी नगरपालिका–५ देउकलियास्थित राष्ट्रिय माविमा १० कक्षामा अध्ययन गर्छिन्। उनी भूतप्रेतमा विश्वास गर्दिनन्। गाउँका एक युवाले भोलेबाबाको ढोंग रचेर युवतीलाई ‘टार्गेट’ बनाएको उनलाई एकरत्ति मन परेको थिएन। ‘गाउँकै चिनेको मान्छे, तपार्इंले गरिरहेको काम ठीक होइन भनेको त मेरो ढाडमा दुई/तीन पल्ट हिर्कायो र म भागेँ’, उनले भनिन्, ‘तँ मलाई विश्वास नगर्ने ? मलाई विश्वास नगर्नेलाई म नास गरिदिन्छु भनेर धम्कायो।’
भोलेबाबा उर्फ रामबहादुर, किस्मती र स्मारिकाविरुद्ध राधा र अर्की एक महिलाले (नाम गोप्य राख्ने सर्तमा) बोक्सी आरोपमा अमानवीय यातना दिएको उजुरी हालेका छन्। प्रहरीले थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।